The Best chivaraidzo Parks In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > The Best chivaraidzo Parks In Europe
Kana usina chokwadi icho chivaraidzo mumapaki mu Europe ndiyo yakanakisisa, zvino tarisa mberi. Nyaya Iri mazita mamwe water mumapaki unogona kushanyira mu Europe izvozvi! We achakupa zvakawanda kurondedzerwa mumwe uye sei unogona kuwana kwavari nechitima. Saka ngationei kutanga ndandanda!
The Free chivaraidzo Park mu Europe - Disneyland Paris
Kana iwe mukasaatarira, unofanira kunge akanzwa pamusoro Disneyland muParis. The paka zvinosanganisira zvose munhu anogona kuwana chepakutanga Disneyland muUnited States. Plus, zvinosanganisira maviri dingindira anovaraidza uye vanosvika vanomwe Hotels pamusoro-panzvimbo! Iwe ingangova vanoda mazuva anoverengeka kana uchida kushanyira zvose. Uyezve, unogona kushanyira Walt Disney Studios ndizvozvo inotevera kuti paki.
Panyaya yokusvika mupaka, zviri nyore kusvika ikoko nechitima. Chimwe chezvinhu nechepakati chitima hubs muFrance zvakarurama pedyo Disneyland. The Center mubvunzo Marne-la-Vallee / Chessy chiteshi, uye iwe unogona kusvika zviri nyore kubva zvapo France kana kudarika. Chii chimwe, Disneyland iri isiri kure Paris.
Lyon kuna Disneyland Marne-la-Vallee Zvitima
The Most Popular chivaraidzo Park mu Germany - Europapark
Europapark ndicho chikamu chikuru uye akakurumbira kupfuura paka yose Europe, zvakanaka pashure Disneyland. zvisinei, ndicho wadii isu nayo vakasarudza. Ndicho chimwe chezvinhu water mumapaki muEurope kwedu mafungiro nokuda chinotenderera-Coasters. Uchawana kuchovha vakawanda vavo uye zvakawanda zvechokwadi nemamwe. Uchava kuongorora Arthur – ari Newest chinotenderera-Chinoshamisa kuti mubatanidzwa ane indoor / panze mumwe ane rima tasva uyewo!
Unogona kuwana izvi inoshamisa theme theme muRust, guta pedyo Freiburg uye Strasbourg. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kusvika Europapark nokururamisira nyore nechitima, kubva muguta chero. The chiteshi chechitima vamwe 4km kure saka unogona zvino kufamba pasuo, kana kutora imwe nguva mabhazi kuti vaende Park.
Strasbourg kuna Ringsheim Zvitima
Stuttgart kuna Ringsheim Zvitima
MuBasel kuna Ringsheim Zvitima
Offenburg kuna Ringsheim Zvitima
The Fairytale Capital of Europe - Efteling chivaraidzo Park
vanhu vazhinji vaibva zvose muEurope handizivi pamusoro dreamland izvi zvose fairytale vadikani! zvisinei, Park ndiko kuri chimwe munyika dzose vatatu Benelux. Chii chimwe, efteling ndiyo nzvimbo zvose inozivikanwa rengano vapenyu! Vakawanda chaiwo fairytales pakati Hans Christian Andersen, Charles Perrault, uye Hama Grimm kutoitika pano. Ivo anobudiswa kuburikidza navanopinda zvakasiyana-siyana Vatasvi, adventures, uye zvakawanda. Zvese muzvese, uchaita tinoda mazuva dzinenge mbiri kushanyira zvose!
Unogona kushanyira Efteling nokururamisira nyore Via chitima. Zvakanyorwa iri chaipo pakati pamaguta ose makuru muNetherlands. Inoita Park svikika kubva zvose pamusoro Netharenzi uye kudarika. With kurudyi chitima kwokubatana, unogona kusvika paka kubva zvapo Europe. Ndicho chimwe chikonzero nei Efteling riri pakati water mumapaki mu Europe!
Zvese muzvese, zvitatu izvi yedu pamusoro mapiki. Kune vamwe vakawanda vari Europe, kuti vamwe, asi tinonzwa kuti chete zvitatu izvi zvechokwadi yakanakisisa. Unogona Taura nesu kana uchida kuziva zvakawanda pamusoro mumapaki uye chitima anokwira kwavari. wo, inzwa wakasununguka kutora Kutarira yedu Blog. Tiri Kazhinji kunyora pamusoro nzvimbo dzakawanda uye chitima Vatasvi chakakodzera kushanyira uye akatora zvose mhiri Europe!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-amusement-parks-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#MavaraPark #efteling #PortAventura #traveleurope eurotrip chitima kufamba Mazano famba